Shan dal oo Soomaaliya ku jirto oo ciidan nabad ilaalin u diraya Koonfurta Sudan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shan dal oo Soomaaliya ku jirto oo ciidan nabad ilaalin u diraya Koonfurta Sudan
18th April 2014 A warsame Af Soomaali 0
Addis Ababa – Mareeg.com: Urur goboleedka IGAD ayaa qorsheynaya inuu ciidamo nabad ilaalin ah u diro dalka Koonfurta Sudan, halkaasoo tan iyo bishii Decmeber ee dhamaadkii 2013 ay socda dagaallo u dhaxeeya dowladda iyo falaago ku kacsan.
IGAD ayaa qorsheyneysa iney dalka day’ada yar ee Koonfurta Sudan ciidamadaasi gaaraan dhamaadka bishaan socota ee April, sida laga soo xigtay sarkaal aad ugu dhow wada xaajoodka u dhaxeeya dowladda Koonfurta Sudan iyo fallaagada ku kacsan.
Raysul wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn, oo ah gudoomiyaha xilligaan ee IGAD, islamarkaana dalkiisu martigeliyey wadahadallada Koonfurta Sudan ayaa u sheegay madaxweynaha dalkaas Salva Kiir in IGAD qorsheysay iney dalkiisa u dirto ciidan nabadda ilaaliya, sida ay qortay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu Agency oo soo xigatay sarlaak ku dhow IGAD.
Sida uu sheegay sarkaalka wakaaladdu soo xigatay oo aan magaciisa la sheegin, ciidamada nabad ilaaalinta ah ee loo dirayo Koonfurta Sudan ayaa ka koobnaan doona dalalka 5-ta ah ee xubnaha ka ah ururkaas ee kala ah: Ethiopia, Djibouti, Kenya, Uganda iyo Somalia. Xubnimada Eritrea ee IGAD ayaa la hakiyey, sidaas darteed Eritrea kama qeybgeleyso howlkaan nabad ilaaalinta Koonfurta Sudan.
Dalka South Sudan ayaa bishii December 2013 waxaa ka qarxay dagaal u dhaxeeya dowladda uu hogaamiyo madaxweybe Salva Kiir iyo fallaago uu horkacyo madaxweyne ku xigeeenkii hore ee xilka laga qaaday Riek Machar, waxaana dagaalku markii dambe isu rogay qaab beeleed.
Hadii ay dhacdo in ciidamada Soomaaliya qeyb ka noqdaan howlgalka nabad ilaalinta Koonfurta Sudan ayaa loo arkaa iney taasi dhiiri gelin u noqon doonta ciidamada oo muddo burbursanaa, islamarkaana dhaqankoodu is badeli doono.
Kenya: UN agency disturbed by arrests and deportations of Somali refugees
Somalia:Dozens killed after brutal violence erupts in Bal’ad